Viet Nam, Sivilizasiona sy Kolontsaina - NY TINSMITHS, COINS CASTERS, GOLDSMITTS and SILVERSMITHS, TINMEN, BRONZE-FUNDERS, LOCKSMITHS - The Holy Land of Vietnam Studies
They niasa tamin'ny tinplate, zinc ary tin. Talohan'ny nahatongavan'ny Occidental, ny indostrian'izy ireo dia voafetra ihany tamin'ny famokarana cones kely mihodidina satroka, kaopy misy menaka ampiasaina ho jiro, boaty misy opium ary fitaovana hafa vitsivitsy. Taorian'izay dia nisy fivoarana lehibe izany. Rehefa miasa ny mpanefy vifotsy nentim-paharazana dia mijanona na mipetrapetraka, mampiasa amin-kery ny tanany sy ny tongony izay nikambanan'ny ankiben-tongotra roa, na ny ankihiben-tongony sy ny rantsantongotra faharoa, ka lasa vice velona, ​​malefaka sy mafy orina. Izany dia ahafahana manolotra ireo zavatra miasa eo ambanin'ny toe-javatra tadiavina ho an'ny fitaovana (rakitra, maritoa, rivet-driver) karakarain'ny tanana izay mbola malalaka. Farany, amin’ny asa fanapahana, ny rantsan-tongotra tsy azo hozongozonina amin’ny mpanety dia fehezin’ny ankiben-tongotra, raha ny tanana roa kosa no mivily ny sampana mihetsika ary ny [pejy 190] kosa dia mitarika ny ravin-taratasy tsy maintsy hokapaina. Ny teny hoe "quặp” dia maneho ny hevitra hoe maka zavatra iray eo anelanelan’ny rantsan-tongotra faharoa sy ny an-tongotra. [Pejy 191]
[Pejy 191] TNy vola madinika voalohany sy ny bara volamena dia nataon'i Lưu Xuân Tín tany Hanoi, araka ny teknika sinoa (Niaina teo ambanin'i Lê Thánh Tôn ie tamin'ny taona 1461 i Tín).
TNy vola madinika efa novolavolaina sy natsofoka (fa tsy vita) dia nisy loama be dia be nafangaro zine.
TNy rojo famokarana dia toy izao manaraka izao (jereo koa ny fanamboarana vola madinika (sapèques) ao amin'ny Revue Indochinoise, 1900).
fanariana metaly anidina ao anaty lasitra;
Fanasokajiana vola madinika azo ampiasaina.
MPanefy volamena sy mpanefy volafotsy
TNy mpiahy ny mpanefy volamena dia ny telo mirahalahy Trần Hòa, Trần Điện ary Trần Điền izay nianatra ny zavakanto tany Shina tamin'ny taonjato faha-6.
A vata kely misy vatasarihana, misy akora sarobidy sy zavatra iasany, ary faranana amin'ny tafo mitsivalana misy piston (cái bễ) ampy ho an’ny mpanefy volamena sy volafotsy. Ny fantson-drano mivoaka avy ao amin'ny tratra dia raisina ao anaty lavaka nolavahana amin'ny tany. Biriky roa sy saribao vitsivitsy no mahaforona lafaoro. Mallet hazo mitam-piadiana vy (búa và), teboka sokitra, bozaka hazo vitsivitsy ary vilia kely no mameno ity fitaovana matihanina ity. Afa-tsy peratra vitsivitsy (peratra firavaka na rojo vy), tsy nisy fanamboarana zavatra goavana. Ny firavaka rehetra dia vita amin'ny takela-bolafotsy na volamena, matevina na kely kokoa, miasa amin'ny repoussé, miendrika na voatomboka ho mora kokoa raha metaly madio tsy misy firaka no resahina. Ny firavaka volamena notsofoka dia atsoboka ao anaty ranom-boankazo mangotraka sy mivondrona, na voninkazo sophora (hoè) na ny tai chua pericarp (Garcinia pedunculata). Avy eo, sasao amin'ny fandroana solifara mafana izy ireo. [Pejy 191]
TNy mpandova dia Phạm Ngọc Thành izay nampiditra teknika sinoa tany Vietnam Avaratra tamin'ny taona 1518.
[Pejy 192] Traditional fandrahoan-tsakafo vilia vita amin'ny varahina voatoto, miaraka amin'ny fiolahana mahay mifandimby, manaporofo teknika tonga lafatra, ankafizin'ny connoisseurs.
TNy mpandova azy dia Bonze Khổng Lộ izay nianatra ny fandrendrehana varahina tany Shina ary nanaparitaka ny teknikany tany Vietnam Avaratra tamin'ny taona 1226. Marihina fa ny fitaoman'ny vahiny ivelany dia toa an'i Jean de la Croix, portogey hybride, mpanorina ny tafondro ao Huế (taonjato faha-18). Voninahitra foana ny fandoroana savoka very. Ny sarivongana Trần Vũ (pagoda araka ny tokony ho izy ilay antsoina hoe Bouddha Lehibe any Hanoi) ary ny urns dynastique ao Huế dia mampiseho ny fahaizan'ireo vietnamiana mpanorina varahina (jereo koa ny Chochod, Fomba fananganana ampiasaina ao Annam, ao amin'ny BEFEO, IX, 155).
SNy kolontsaina inoid dia nahafantatra ny padlock-roller sy ny spring-stud, izay matetika ampiasaina hanidy fanaka lehibe. Amin'ny kolontsaina vietnamiana nentim-paharazana, tsy fantatra ny padlock ary voahidy amin'ny fanindriana ny vavahadin'ny trano, mampiasa bara hazo.
+ L. Cadière. Zavakanto ao Huế, ao amin'ny BAVH, 1919.
(Visited 18 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Viet Nam, Sivilizasiona sy Kolontsaina – NY MPANATRA
Fitsidihana anio: 23
Andro farany 7 nitsidika: 2,329
Total visits: 433,509